Ohatrinona no aloanao amin'ny Super Mario Run? Nintendo te hahalala | Vaovao IPhone
Lalao tamin'ny taona io, nahazoana alalana avy amin'i Pokémon GO, Super Mario Run Izy io angamba no lalao nandrasana indrindra tamin'ny tantaran'ny fitaovana finday taorian'ny nanehoana azy tamin'ny fampisehoana Keynote farany an'ny iPhone 7 vaovao tamin'ny volana septambra. Ary ny toetra amam-panahy naman'i Nintendo no mpiara-dia amintsika maro tamin'ny fanombohana teo amin'ny tontolon'ny lalao video, ny konsolan'ny lalao video Nintendo rehetra dia tompon'andraikitra amintsika rehetra miandry am-pitiavana ny Super Mario Run.
Mazava ho azy, manoloana ny fiandrasana be dia be dia mora ho antsika ny ho diso fanantenana haingana, ary tsy maintsy tadidintsika fa tsy manana Game Boy na zavatra mitovy amin'izany isika, ny Super Mario Run dia nifanaraka tamin'ny ny efijery an'ny iPhone ary manova ny lalao ho lasa "mpihazakazaka". Raha manampy an'izany isika raha te hilalao tontolo mihoatra ny iray tsy maintsy aloantsika dia vonoy ary andao handeha. Eny, misy ny olana amin'ny filozofia amin'ny fandoavana lalao na fampiharana, ny olana mitovy amin'ny teo amin'ny sarimihetsika sy ny mozika, ary amin'ny zavatra toa mahasitrana antsika. Nintendo dia nahatsikaritra ary mandefa a fanadihadiana manontany momba ny vidiny aloany ho an'ny kinova ho avy.
Araka ny hitanao amin'ny sary teo aloha, Nintendo dia manontany antsika fanontaniana somary mazava: Ohatrinona ny karamanao farany indrindra amin'ny Super Mario Run? Fanontaniana iray ao anatin'ny a fitsapan-kevitra fa Nintendo mandefa sasany mpampiasa izay nampifandray ny Super Mario Run amin'ny kaonty My Nintendo. Ny fanontaniana dia tonga mba hanao fanadihadiana amin'ireo mpampiasa rehetra mimenomenona ny amin'ny tokony handoavana € 10 ho an'ny lalao feno, eny, tsy mila mandoa intsony isika toy ny amin'ny lalao maro hafa.
Ary tsy ny vidiny ihany, araka ny hitanao, Anontaniana ihany koa izahay momba ny fahaliananay amin'ny fanontana vaovao an'ny Super Mario Run, ary izany ve tsy tiako koa ny lalao filalaovana, ary mazava ho azy fa fanalahidin'ny mpampiasa ny manohy liana amin'ny kinova ho avy.
Izaho manokana mino izany ny olan'ny vidiny dia resaka filôzôfia malalakaFahita matetika ny mieritreritra fa ny fampiharana sy ny lalao nomerika dia tsy maintsy atao maimaim-poana, tsy misy olona mijery ny vola lany amin'ny fivoarany. Eny, azonao atao foana ny milaza fa manana vola miditra ampy i Nintendo ary orinasa lehibe no mandray ny vola rehetra, saingy marina izany Ireo orinasa ireo dia manakarama olona izay mivelona amin'izany ary noho izany dia tsy tokony taitra isika amin'ny fandoavana € 10 amin'ny lalao iray. Tsy misy manery anay, ka aorian'ny fanandramana ny ambaratonga voalohany dia afaka manapa-kevitra ianao raha mendrika ny hanohy hilalao Super Mario Run.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Ohatrinona no aloanao amin'ny Super Mario Run? Nintendo te-hahalala
Aleoko mandoa ny fampiharana feno na dia 9 euro aza izany, fa tsy ny hosoka amin'ny maimaimpoana hilalao hajia izay fantatrao 4,99, 9,99, 49,99 ary 99,99 euro mba handrosoana hatrany. adala ve isika sa inona, izy ireo dia tokony ho izay aloanao ary mandrakizay tsy mivoha daholo. Novidiko io ary tsy manenina aho. Fantatro fa manana izany feno aho ary tsy mila mandany bebe kokoa. koa ny tomany rehetra izay mitentina 9 euro ary eo am-pelatanan'izy ireo finday izay mitentina 80 heny kokoa, adala ve isika sa ahoana?
PiRiT dia hoy izy:
Rehefa tsy amidy izy ary ao anatin'ny herinandro dia ampidinin'izy ireo hatramin'ny 4,99 €, ilay manana endrika adaladala dia ilay iray andro vitsivitsy talohan'izay no nandoa izany € 9 …… ..
Valiny amin'i PiRiT
lgruz dia hoy izy:
Ankoatra ny filozofia malalaka, izay amin'ny lalao nandrasana hatry ny ela dia mety ho faningana, miaraka amin'ity lalao ity dia mahita olana roa aho. Ny voalohany, ny vidiny ambany raha oharina amin'ireo sehatra hafa, nefa lafo raha miresaka finday isika. Izany no mahatonga izany, rehefa mahita ny vidiny dia toa be loatra amintsika. Ary ny olana hafa dia ny manaja amin'ny fampifanarahana ny lalao rehetra amin'ny mekanika mitovy amin'ny finday. Ny efijery mikasika ny telefaona finday dia tokony hamela anao hibaiko bebe kokoa fa tsy hihena. Toa ahy ny mpihazakazaka izay lalao ilana fanazaran-tena be dia be mba hilalaovana tsara azy ireo, ho an'ny fitaovana iray izay mety hampiasaintsika amin'ny fotoana kely fotsiny. Miteraka adin-tsaina vitsivitsy izy ireo ary mametra ny fahalalahana mihetsika. Ity, ho an'ny Super Mario, dia diky, satria tsy mahazatra ny miverina satria very vola kely isika, na mijanona mandra-takona ilay voninkazo. Tsy lazaina intsony ny fitsapana ny fantsona sy ny zoro rehetra, sao sanatria. Miaraka amin'ity kinova ity izay very rehetra.
Zavatra mitovy amin'izany no mitranga amiko amin'ny lalao simulation. Simcity Buildit, na ilay Theme Park efa simba, dia nanova ny filozofian'izy ireo tamin'ny alàlan'ny fampifanarahana azy amin'ny telefaona finday, ny fanaovana ny zava-drehetra, ny zava-drehetra, dia mitaky fitendrena ireo balaonina miseho amin'ny efijery. Ankehitriny, ny hetra na ny tapakila dia tsy voaloa ho azy, fa balaonina marobe no miseho amin'ny efijery iray manontolo izay tsy maintsy tsindrio. Amin'ny farany, dia toa ity lalao ity no zava-dehibe kokoa noho ny zavatra hafa rehetra.
Mamaly an'i lgruz
JoseG dia hoy izy:
Faly mandoa! $ 10 dôlara lanin'olona na inona na inona banga any!
Valiny tamin'i JoseG
Tena tsy tiako izany, very ny filozofia Mario, (mihazakazaka fotsiny ary mamely ny toho-tantely mba hitsambikina) Milalao an'i Mario hatramin'ny voalohany aho, sary maro fa tsy nisy na inona na inona nomeny ny tenany teo amin'ny sehatra console. Ary Tsy mandoa € 1 amin'izany aho, handany ora maro amin'ny fampandrosoana izy ireo saingy tsy tiako izany ary na dia kely aza ny vola aloa mba hanohizana milalao, hoy ny hevitro.
Jzezar dia hoy izy:
Eny, ho ahy izany dia mety mitentina $ 50 ary handoa izany. Raha mbola milaza ny fomba filalaovany azy. Tsy mampihomehy mihintsy io mihazakazaka sy mihazakazaka io. Ny marina dia tsy hilalao azy io na dia maimaim-poana aza.
Mamaly an'i Jzezar
gaga dia hoy izy:
Nanjary adala aho rehefa tsapako fa mila mandoa izany aho ... Handoa € 0 marina aho amin'izany. Adala ve isika? Mpihazakazaka iray hafa indray izy, toa an'ireo 8000 misy. Samy manana ny mahasamihafa azy avy. Ity iray ity ihany no nomena anarana nomena an'i Mario. Tondro. Azon'izy ireo natao ny nametraka azy io maimaim-poana tamin'ny micropayments mba hahazoana tombony. Inona no olana amin'izany?
Valiny ho an'ny Gaga
Fantastical 2 ho an'ny iPad, vidiny antsasaky ny fotoana voafetra